पुरुषमा प्रजनन क्षमता गिरावट एउटा अवस्था हो जसलाई पुरुषमा बिस्तारै हर्मोनहरुको मात्रा घट्दै जान्छ l हर्मोनल उतारचढावहरु साधारणतया महिलासँग जोडिएका शब्दहरु हुन् तर हर्मोनहरु महिलाको जस्तै पुरुषको भाग पनि हो l त्यसैले पुरुषमा रजोनिवृति महिलामा जस्तै एउटा वास्तविकता हो lमहिलामा डिम्बक्षरण र हर्मोनल तहहरुमा अचानक गिरावट भन्दा फरक पुरुषमा प्रजनन क्षमतामा गिरावट एउटा बिस्तारै हुने प्रक्रिया हो l पुरुषहरुमा परिणाम त्यति प्रष्ट हुदैनन् l स्वास्थ्य जोखिमहरु यद्दपी महत्वपूर्ण हुन्छन् र सुरुवातमै पुरुष प्रजनन क्षमतामा गिरावटको लक्षणहरु पहिचान गर्नु महत्वपूर्ण हुन्छ l थप बुझ्न अरु पढ्नुहोस् l एउटा स्वस्थ पुरुषमा ३००-१२०० एनजी/डीएलको टेस्टोरेस्टोन तह नर्मल मानिन्छ l जब मान्छेको उमेर बढ्दै जान्छ, टेस्टोरेस्टोन तहहरु बिस्तारै तल जान्छन् l ३० वर्षको उमेरपछि, प्रत्येक वर्ष १% तह घट्छ l ५० वर्षको उमेर पुग्दासम्म एउटा पुरुष प्रजनन क्षमतामा गिरावटमा पुग्छ l तपाईंको टेस्टोरेस्टोन तहहरु घटिरहेको छन् कि बुझ्न निम्न लक्षणहरु विचार गर्नुहोस्: कम यौन चाहना: कम यौन चाहना घट्दो टेस्टोरेस्टोन स्तरहरुको पहिलो चिन्ह हो l लिंग उत्तेजना नहुने: टेस्टोरेस्टोन नाइट्रिक अक्साइड रिहाइको लागि जिम्मेवार हुन्छ जसले उत्तेजना गराउछ l उमेरसँग टेस्टोरेस्टोन तह घट्ने हुँदा, उत्तेजना पाउन र त्यो लामो समयसम्म कायम गराउन कठिन हुनसक्छ l कम शुक्रकिट स्तर: साधारणतया विर्यपात हुने शुक्रकिट ०.१ र १० एमएल बीचको फरकमा हुन्छ l यो साधारण स्तर अन्डकोष, सेमिनल भेसिकल्स र प्रोस्टेट सबैको कुशल कार्यले हुन्छ, सबै टेस्टोरेस्टनको प्रभावमा काम गर्छन् l जब तपाईको उमेर बढ्छ, टेस्टोरेस्टोन स्तर घट्छ र विर्यपात हुने मात्राको विर्य पनि घट्छ l कामोत्तेजना समस्याहरु: जब तपाईंको उमेर बढ्छ, टेस्टोरेस्टोन स्तरहरु घटेको कारणले प्रत्येक समय कामोत्तेजना पाउन अलिक कठिन हुनसक्छ l मुड परिवर्तन हुने: यो महिलामा जतिनै हुन्छ पुरुषमा पनि त्यतिनै हुन्छ l रोमान्चक कुरा के छ भने यसमा जसले यो भोग्छ उक्त पुरुष त्यसलाई स्वीकार गर्ने र थाहा पाउने अन्तिम व्यक्ति हुन्छ l त्यसैले यदि तपाईं सानो सानो कुरामा दिक्क मान्नुहुन्छ भने तपाईंको टेस्टोरेस्टोन स्तर जाँच्नुहोस् l निराशा: जब तपाईं जुनैसुकै समय झोक्राएको वा सुस्त हुनुहुन्छ भने, तपाईंको टेस्टोरेस्टोन स्तर निकै तल खसेको हुनसक्छ l पेटको बोसो: यो घट्दो टेस्टोरेस्टोन स्तरको एउटा सुरुवाती लक्षण हो l पेटको बोसो बढ्दो उमेरको संकेत हो l न्युन टेस्टोरेस्टोन स्तरको बढ्दो उमेरको लक्षण हो l टेस्टोरेस्टोन स्तर कम हुने सबै पुरुषहरुमा लक्षणहरु नदेखिन सक्छ l त्यस्ता अवस्थाहरुमा, कुनै उपचारको आवश्यकता हुँदैन l न्युन टेस्टोरेस्टोन अरु कुनै अवस्थाहरु जस्तै थाइराइड रोग, अत्यधिक मदिरा सेवन, निद्रामा स्वास फेर्न कठिनाइ आदिले पनि हुनसक्छ l ३० वर्षको उमेरपछि, टेस्टोरेस्टोन स्तरको प्रति वर्ष १%ले घट्छ l एउटा पुरुष ५० वर्षको पुग्दासम्म उ प्रजनन क्षमता गिरावटको अवस्थामा हुन्छ l यी कारणहरु पहिचान गरेर हटायो भने त्यसले टेस्टोरेस्टोन स्तर नर्मलमा फर्काउनेछ l यद्दपी न्युन टेस्टोरेस्टोन स्तरहरु कुन कारणले गरेको हो भने पत्ता लाग्दैन भने त्यो साधारण उमेर वृद्धि र प्रजनन क्षमता गिरावटको प्रष्ट संकेत हो l महिलामा जस्तै पुरुषसँग पनि हर्मोन प्रतिस्थापन थेरापीको विकल्प छ l यद्दपी यो उपचार विधि विवादास्पद छ l केही पुरुषहरुमा, टेस्टोरेस्टोन प्रतिस्थापनले थुप्रै लक्षणहरुबाट छुट्कारा दिनसक्छ तर जोखिमहरुले लाभलाई उछिन्छन् l हृदयघातको उच्च जोखिम, प्रोस्टेट क्यान्सर र अन्य स्वास्थ्य समस्याहरु टेस्टोरेस्टोन प्रतिस्थापनसँग सम्बन्धित छन् l घट्दो टेस्टोरेस्टोन स्तरहरुसँग सम्बन्धित समस्याहरुको लागि हर्बल पुरकहरु साधारणतया सुरक्षित मानिन्छन् तर तिनीहरुको पनि प्रमाणित स्वास्थ्य फाइदाहरु छैनन् र प्रोस्टेट क्यान्सरको जोखिम बढाउने भन्ने मानिन्छन् l पुरुषमा प्रजनन क्षमता गिरावट महिलामा जस्तो नाटकीय र छिटै हुदैन तर यो एउटा वास्तविकता हो l यो थुप्रै वर्षको समय अवधीमा बिस्तारै हुन्छ l
यो प्राचिन विज्ञानसँग स्वास्थ्यमा साथै रोगहरु उपचार गर्न ठुलो फाइदाहरु छ lयो प्राचिन विज्ञान मानवजातीको लागि युगौंसम्म फाइदाजनक छ l योगको स्वास्थ्य फाइदाहरु संसारभर आधुनिक औषधीद्वारा स्वीकार पनि गरेको छ l योगले एउटा बलियो र स्वस्थ शरीर बनाउँछ l गहिरो स्वास लिने र व्यायामहरुले दिमाग शान्त, केन्द्रित र तीक्ष्ण राख्न मद्दत गर्छ l यसले तनाव हटाउन र दिमाग शान्त गर्न मद्दत गर्छ l यसले हाम्रो स्नायु प्रणाली सन्तुलन गर्छ, हाम्रो दिमागको कार्य सुधार्छ र परिणाम स्वरूप सबै शरीरको कार्यहरु सुधार गर्छ l जब हामी तनावमा हुन्छौ त्यतिबेला हामी सृजनसिल हुन सक्दैनौ l योगले तनावबाट मुक्ती दिन्छ र सृजनसिलता सुधार्छ l यसले थुप्रै स्वस्थ अवस्थाहरु जस्तै हाइपरटेन्सन, मधुमेह, मोटोपन रोकथाम गर्नुको साथै उपचार गर्छ र सम्पूर्ण रोग प्रतिरोधक शक्ति सुधार्छ l
धेरै अवस्थामा, त्यस दुखाइ राहत क्रीम गर्दन समस्याको समाधान होइन ।गर्दनमा कुनै पनि दुखाइ साँच्चै मात्र हो: गर्दनमा एक वास्तविक दुखाइ! र यो वास्तव मा डरलाग्दो हुन सक्छ । निरन्तर गर्दनको दुखाईलाई बेवास्ता गर्नुहुँदैन र चाँडो चिकित्सकलाई देखाउनु पर्छ । यदि चिकित्सकले कुनै गम्भीर अवस्थाको निचोड बनाउँछ भने, दुखाई गल्ती आशन र असजिलो गरी बस्ने बानिसँग सम्बन्धित हुनसक्छ । गर्दनको दुखाईका कारण केहि सामान्य आशन: यदि टाउको पाखुराको अगाडि राखिएको छ भने, नजचाँएमा यसले गर्दनको भर्टिब्रेमा अनावश्यक तनाव उत्पन्न गर्दछ र यो सजिलै डिजेनेरेटिभ डिस्क रोगमा बदल्न सक्दछ, अचयनित भएमा । कम्प्युटरको अगाडि लामो घण्टाको लागी बस्नाले गर्दन अगाडी झुक्छ जसले गर्दनमा कष्ट र पुरानो गर्दनको दुखाइ बढाउन सक्दछ । गर्दन के को कारण दुख्छ ? हड्डी वा जोडीहरूमा असामान्यताहरू ट्रमा खराब आशन उपासनात्मक रोगहरू ट्यूमर मांसपेशी तनाव कहिलेकाहीँ गर्दनको दुखाइको कारण सर्भिकल फोरामिनल स्टेनोसिस जस्तै केहि गम्भीर हुन सक्छ ।
Q पागलपना वा क्रेजी र सन्काहा वा ईसेन्ट्रिक हुने बिचमा के फरक छ ?
क्रेजी शब्दले पागलपन वा चरम उत्साहलाई दर्शाउदँछ । ईसेन्ट्रिक शब्दको अर्थ आधुनिक, थोरै अनौठो वा अनौठो व्यवहार हो जुन परिभाषित संस्कृति भित्रको स्वीकृत मापदण्डको रूपबाट विचलित हुन्छ ।
Q मेरो १४ वर्षकी छोरीको मुख नजिकको गालाको छेउमा मोटो मासुको डल्लो साँच्चिकै बाहिरबाट देखिन्छ । मलाई लाग्छ तिनीहरूलाई उल्टो गालाको खोपिल्टो वा डिम्पल भनिन्छ । उनी मुश्किलले तिनीहरूसँग आफू धेरै सजग छिन् र हामीले पहिला बच्चामा यस्तो देखेका थिएनौं । अथवा त्यहाँ केहि अरु अन्तर्निहित समस्या छ
तिनीहरूलाई परीक्षण नगरिकन के हो भनेर भविष्यवाणी गर्न कठिन छ । यद्यपि यदि तपाईंको छोरी यसबाट खुशी छैन भने, त्यसबेला तपाईंले यसबाट कसरी छुटकारा कसरी पाउने भन्ने सम्बन्धि कस्मेटिक चिकित्सकको विचार लिनुपर्छ ।
Q मेरो बच्चाहरु धेरे नै टाउको दुख्ने समस्याबाट जोगाउन म कसरी मद्दत गर्न सक्छु ?
तपाईंले निम्न उपायहरू अपनाएर आफ्नो बच्चामा हुने धेरै टाउको दुख्ने समस्याबाट छुटकारा पाउन सक्नुहुन्छ: थाहा भएका कारकहरू तत्वहरुबाट बच्नुहोस् । तपाईंको बच्चालाई राम्रो सन्तुलित आहार दिनुहोस् । खानाहरुको बीचको लामो अन्तरलाई हटाउनुहोस् । तपाईंको बच्चालाई राम्रोसँग पानी पुगेको वा हाइड्रेटेड भएको सुनिश्चित गर्नुहोस् । यसमा तपाईंको बच्चालाई नियमित रूपमा ७- ९ घण्टा गुणस्तरीय निद्रा भएको हेर्नुहोस् । तपाईंको बालबालिकालाई तयारी वा जङ्क खानेकुरा र अत्याधिक चिनी भएको पिउने कुराहरु कटौती गर्नुहोस् । तपाईंको बच्चालाई यदि केहि कुराले दुख दिइरहेको छ भने, निजसँग कुराकानी गर्नुहोस् ।
Q म २७ वर्षको भएको छु । म केही दिनमा नै चाँडै विवाह गर्न जाँदैछु । मलाई धेरै कपालरहरू छन् । काँधमा ... पछाडि ढाडमा ... र छातीमा .. मैले तिनीहरूलाई कसरी हटाउनुपर्छ ? छातीमा मात्रै थोरै कपाल चाहन्छु ।
पुरुषहरूको छाती, काँध र पछाडि ढाडमा कपाल हुनु सामान्य हो । तपाईं छातीको कपाललाई काट्न सक्नुहुन्छ; विभिन्न साधनहरूसँग बिद्युतीय क्लिपरको प्रयोग गर्नुहोस् । यस्तो गर्दा केही दुखाई हुने हुदैँन र फेरि बढ्नको लागी कम्तिमा एक महिना लाग्छ । रेजर र सेभिङ क्रीम प्रयोग गर्दा फेरि छिटो बढ्ने हुन सक्छ । मैन वा वाक्स लगाउनुको सट्टामा । यस्तो गर्दा थोरै दुखाइ हुन सकेपनि, यो लगभग ६ हप्तासम्म रहन्छ । बिद्युतीय रेजरले पछाडिको ढाँडक कपाल काटेपनि राम्रो हुन सक्छ । इलेक्ट्रोलाइसिस वा लेजरको कपाल हटाउने विकल्पहरू पनि त्यहाँ छन् तर यिनीहरु महङ्गा छन् ।